Marcos Xiorro, oo ah addoonsiga kaas oo qorsheynaya inuu kacdoon ka sameeyo Puerto Rico - Afrikhepri Fondation
Sabti, Sebtember 18, 2021
Marcos Xiorro, oo addoon ah oo 1821 qorsheynaya kacdoonka Puerto Rico
Marcos Xiorro wuxuu ahaa addoon, kaasoo 1821 qorsheynayay kacdoon addoon oo ka dhan ah milkiilayaasha beeraha sonkorta iyo dowladdii Isbaanishka ee Puerto Rico. Xitaa qorshuhu si sax ah ugama shaqeyn sidii ay ahayd, wuxuu saameyn weyn ku yeeshay addoommada waana qayb ka mid ah taariikhda Puerto Rican. Ma garanayno si sax ah halka uu Marcos ku dhashay, iyo gobol kasta oo Afrikaan ah oo laga qabtay, waxa kaliya ee aan ognahay ayaa ah in Isbaanishku ka soo qaaday Afrika una adeegay Vicente Andio gaar ah, mulkiilaha beerta sonkorta.
Puerto Rico, mucaaradka ugu horreeya ee sidan oo kale ah ayaa ka dhacay 1527, markii darsin shaqaale ah ay dagaal kula dagaalameen gumeysiga Isbaanishka. Daacadnimadu way ku fashilantay, addoommaduna waxay u suurtagashay inay ka baxsadaan buuraha si ay u sameeyaan bulshooyinka hoygooda oo ay la wadaagaan Taino (dadka ku dhashay jasiiradda). Ka dib kacaankii Haitian, Faransiiska oo la garaacay ayaa u qaxay Jamhuuriyadda Dominican kadibna waxay u tageen Puerto Rico, halkaas oo ay degeen oo ay go'aansadeen in ay jasiiradda ka sameeyaan, mid ka mid ah suuqyada ugu badan ee sonkorta. Marka loo eego 1873, addoonsiga ayaa laga afduubay Puerto Rico, oo badi hantida mulkiilayaasha ah ee ay mulkiilayaashu ka dhex adeegsadeen waxay ahayd iyadoo la adeegsanaayo addoomo. Oo waxaa ka dhex kacay sino, iyo caasiyiin, iyo kuwa aan naxariista lahayn, iyo kuwa la silciyey sidii idinkoo ah isku afgembin. Intaa ka sokow, ka dib guushii kacaanka Haitian (1791 - 1804), xanta ayaa ku faafay Kariibiyaanka in Haitians ay qorsheeyeen inay weeraraan dhammaan gumeysiyada Isbaanishka. Hadalladaasi waxay ka baqayaan milkiilayaasha beeraha sidii ay hore uga baxsadeen Haiti.
Bishii Luulyo 1821, Xiorro waxa uu rabay inuu ka faa'iidaysto xaaladdiisa si uu u qorsheeyo fallaagada ay la socdaan dhawr addoon oo ka soo jeeda beero kala duwan. Isaga, saaxiibadiisa Mario iyo Narciso waxay isku diyaarinayeen in ay hoggaamiyaan gumaadka addoonta ee Bayamon iyo Toa Baja. Qorshaha ayaa ahaa in la qaato bamamoon, kadibna ay gubaan magaalada oo dhan, oo ay dilaan kuwa aan madow ahayn. Kadib, waxay ujeedadoodu ahayd inay la midoobaan addoommadii magaalooyinka kale sida Rio Pedras, Guaynabo iyo Palo Seco, dhammaan hubeeysan oo diyaar u ah, ka dib guulahoodii, waxay ku soo duulayeen caasimadda San Juan waxayna ku dhawaaqeen Xiorro, boqorka Porto Rico. Nasiib daro Xiorro, milkiilaha beeraha qaarkood oo magaciisu yahay Miguel Figueres waxa uu lahaa hoy adag, "addoon" daacad ah oo la yiraahdo Ambroso kaas oo u sheegay inuu qorsheynayo qorshaha Xiorro iyo saaxiibadiisa. Kalluumaysatadu waxay leeyihiin abaalmarin, addoon kasta oo ka soo horjeeda rabshad kasta, waxaa lagu abaalmariyey xorriyadda iyo wadarta 500 pesos. Figueres ayaa markaa wargeliyay duqa magaalada Bayamon oo u direy ciidamada 500. Hogaamiyeyaasha Xiorro iyo saaxiibadiisa ayaa la qabtay isla markiiba iyaga oo aan rajeyneynin. Guud ahaan 61 addoonsi ayaa lagu xiray Bayamon iyo San Juan.
15 August August 1821, Xiorro iyo saaxiibbadiis ayaa la isku dayay, qaar baa la toogtay, qaar kalena waxaa laga soo tarxiilay jasiiradda iyo dad kale oo la xidhay. Xiorro ayaa si gaar ah loo isku dayay, waxaana qandaraaskiisa aan la ogeyn.
Ka dib markii kacdoonka, waxaa jiray kacdoono kale, addoommadii kale xitaa waxay ka qaybgaleen El Grito de Lares, kacdoonkii madax-bannaanida Puerto Rico ee ka dhanka ah Isbaanishka.
2007, filim la yiraahdo El Cimmaron ayaa soo baxay (sawir muuqaal ah) oo uu la leeyahay actor Pedro Telemaco oo door ka qaatay doorka Marcos Xiorro.
Madow iyo miyir
Sheekada bahdilka ah ee Sarah Baartman
Celia A, addoonkii aan lahayn xuquuq bini-aadam iyo mid sharciyeed inuu yiraahdo maya
Wajiga qarsoon ee shaqada Booba - Documentary (2020)
Waddan si caqli leh u ilaaliya - Documentary (2020)
Gooryaanka Dahabka ah ee Pythagoras - Antoine Fabre-d'Olivet (PDF)